FAQs - Huacheng Haydarooliga korontada Co., Ltd
Muddo intee le'eg ayaa shirkadda la aasaasay?
Waa maxay damaanad ee mashiinka?
About hal sano.
Waa maxay waqtiga dhalmada ee aad mishiinka?
Sidee ku saabsan adeegga-iib aheyn ka dib?
Macaamiisha iibsato waxyaabaha our, waxaan iyaga siin tababar lacag la'aan ah si ay u isticmaali karaan iyo u ilaaliyaan mishiinka si madax-bannaan. Waxaan u jawaabi doonaa su'aal macaamiisha ee technology wakhtiga. Haddii loo baahdo, waxaan ku siin doonaa hanuun on-site.
Waxaan ku siin karnaa talooyinka farsamo oo lacag la'aan ah haddii macaamiisha u baahan tahay qalab cusub.